Ukuzamazama komhlaba okuqinile okungu-6,9 kuhlasela iFukushima | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuzamazama komhlaba okunamandla okuyi-6,9 kuzamazamise iFukushima
Un Ukuzamazama komhlaba okungu-6,9 kunyakazise iFukushima Ekuseni ngoLwesibili, yona leyo ndawo eyacekelwa phansi ukuzamazama komhlaba kanye ne-tsunami eyalandela eyenzeka ngoMashi 2011. Ngenxa yezizathu zokuphepha, iziphathimandla zavula isixwayiso samaza amakhulu zacela izakhamizi ukuthi zishiye lesi sifunda nezinye ezintathu ngokushesha.
Ngaphandle kwe-alamu yokuqala, ngenhlanhla akubanga khona ukulimala noma umonakalo omkhulu.
AmaJapan ashiya idolobha lase-Iwaki ngemuva kokuzamazama komhlaba.
Isithombe - AP
Ukuzamazama komhlaba kwenzeke ngo-05.59 ngesikhathi sendawo (isikhathi esingu-21.59 isikhathi saseSpain). Kutholakale 10km ukujula ngasogwini lwaseFukushima, 200km ukusuka eTokyo. I-United States Geological Survey (i-USGS, ngegama layo lesiNgisi), ibike ukuthi yenzeke ngamakhilomitha angama-67 enyakatho-mpumalanga yedolobha lase-Iwaki, esifundeni saseFukushima.
Ngemuva komcimbi, iziphathimandla zenze ukuthi isixwayiso se-tsunami sazise amagagasi angafika kumamitha amathathu ezifundeni zaseFukushima, Iwate, Mygagi nase-Ibaraki. Kodwa-ke, ekugcineni amagagasi aqoshwa ayizange yeqe amamitha ayi-1,4 edolobheni eliyitheku laseSendai, nakwezinye izindawo ezisengcupheni bafika kuphela kumasentimitha angama-90. Ngemuva kwamahora amathathu isexwayiso sehlisiwe, kuxwayiswa ukuthi kungenzeka amagagasi aphakathi kwamasentimitha angama-20 nemitha elilodwa, kwathi ngesikhathi sendawo esingu-12.50 sasebenza.
Ngaphandle kobukhulu bokuzamazama komhlaba, azikho izisulu noma umonakalo omkhulu. Okhulumela uHulumeni, uYoshihide Suga, ukuqinisekisile ukuthi kunobufakazi bokulimala okuncane okuyishumi nambili. Kepha ukwesaba nokukhathazeka kwawo wonke umuntu kukhulu kakhulu, ngoba kuvuse ukuzamazama komhlaba okungu-9 okwenzeka ngo-2011, kwabulala abantu abangu-18.500 XNUMX. Izakhamizi zamadolobha aseduze nezindawo zenuzi zikhathazekile. Mayelana nalokhu, opharetha i-TEPCO ukusho lokho izikhungo zamandla enuzi azikaze zilimale kakhulu futhi zisebenza ngokujwayelekile. Yize kunjalo, iziphathimandla zicela izakhamizi ukuthi zihlale zinolwazi ngaso sonke isikhathi, uma kwenzeka kubhaliswa ukuzamazama komhlaba okulandelayo.
Sikushiya nevidiyo erekhodwe ngesikhathi kwenzeka ukuzamazama komhlaba:
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuzamazama komhlaba okunamandla okuyi-6,9 kuzamazamise iFukushima
Izinhlelo zemvelo ezibalulekile zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukuzala kwamakhorali